Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari pane yako Mac uye yako iPhone | IPhone nhau
Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari pane yako Mac uye yako iPhone
Chitupa chedhijitari chinhu chinozove chinonyanya kukosha zuva nezuva, nacho tinogona kuzvisimbisa pamapuratifomu mazhinji, kudyidzana nehutongi hweveruzhinji uye nezvimwe zvakawanda pasina kuenda kumunhu kune rimwe remasangano aya. . Nekuuya kwekushandisa kunotsiva zvinyorwa zvedu, zvinova zvinodikanwa kupfuura nakare kose kugadzirira rudzi urwu rwechinhu che software. Tinoda kukuratidza neichi chidiki dzidziso kuti iwe unogona sei nyore kuisa yako setifiketi yedhijitari zvese paMac yako uye pane yako iPhone kuti ugone kuishandisa chero nguva uye chero kwaunoda. Gara wakatarwa nekuti zvichaita kuti zvinhu zvive nyore kwazvo kwauri.
1 Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari paMac
2 Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari pane iyo iPhone
Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari paMac
MaMac edu, pamwe neayo macOS anoshanda sisitimu, anowanzoisa akati wandei matambudziko kana achisangana nePublic Administration nekuda kwekuderera kwavo nemhando iyi yemasisitimu, zvisinei, musazvidya moyo nekuti zvese zvine mhinduro. Chinhu chekutanga chatichaita kuenda iyo FNMT webhusaiti kuenderera mberi nekukumbira chitupa chedu chedigital kuburikidza nesoftware, kunyangwe tichida chitupa chemunhu chaiye kana kana chatiri kuda kuwana chitupa chedigital chekumiririra munhu zviri pamutemo (makambani, masangano, nheyo ... nezvimwewo).
Kune izvi tinoenda ku IZVI Kero yewebhu. Kana tangopinda, tinobaya pane sarudzo "Kumbira Chitupa". Pano isu tinowana chekutanga chinogumbura, inotitaurira kuti bhurawuza redu haritsigirwe, Safari haienderane kurodha dhijitari chitupa, asi usazvidya moyo, nekuti isu tine mhinduro, isu tinongofanirwa gadza vhezheni 68 yeMozilla Firefox yatinogona kuwana mukati IZVI ZVINONZI. Kana tango dhawunirodha, isu tinongoenderera nekumisikidza nekumhanyisa zviri nyore, uye ikozvino tava kuzoigadzirisa kuitira kuti itibvumidze kuita kuiswa kwechitupa chedigital. Kugadzirisa Mozilla Firefox 68 yeMac uye iite kuti ienderane nechikumbiro uye kurodha setifiketi yedigital isu tinongofanirwa teerera unotevera chitupa chemidzi (TARIRA)
Kamwe kurodha pasi, isu tinofanirwa kutarisa matatu mabhokisi achipa iko kuzere kuwana kune yedu system Kuti tione kuti takaiisa nemazvo tinofanira kutevera nzira inotevera muFirefox: Menyu> Sarudzo> Yepamberi> Zvitifiketi tebhu> Tarisa zvitupa bhatani. Ikoko isu tinofanirwa kuve nechokwadi chekuti Mudzi CA Chitupa FNMT-RCM yakanyatso kumisikidzwa. Isu tatova neMozilla Firefox yakagadzirira kukumbira uye kurodha setifiketi yedu yedhijitari, ikozvino isu tinongofanirwa kuvhura application uye pinda chikumbiro zvakare (LINK).
Isu tatova pane webhusaiti yekushandisa, ikozvino isu tinongofanirwa kuzadza iwo mabhokisi anoonekwa pazasi: DNI kana NIE nhamba, yekutanga zita, email uye password kureba (pano isu tinogara tichisarudza giredhi repamusoro). Yekutanga yakakosha ruzivo ndeyekuti isu tinofanirwa kuve nechokwadi kuti gare gare isu tinokwanisa kurodha pasi chitupa kubva kune imwechete komputa uye imwechete browser kubva kwatakakumbira, kana zvisina kudaro ichatipa iko kukanganisa uye hatizokwanise kuiisa, ndosaka iri imwe yeakanyanya kufanira kuita mune yese nzira.
Kana taita chikumbiro tinogamuchira email ine "application code" yatinofanira kuchengetedza, uye danho rinotevera kuratidza humbowo hwedu. Kune izvi, zvichave zvakakwana kuti uende kune chero Social Security hofisi, Mutero Agency (nekugadzwa mune izvi link) kana kumahofisi ane mvumo eKanzuru yeGuta redu neID yedu nekodhi yekukumbira email. Ikoko mukuru anozviratidza kuzivikanwa kwedu otigonesa kurodha chitupa chedigital kuti tikwanise kuwana yekupedzisira nhanho, yakapusa pane ese. Unogona kushandisa hofisi nzvimbo (link) kuziva kwaungaenda kuratidza humbowo hwako.
Uye ikozvino isu tinopfuurira kune yekupedzisira nhanho uye yakapusa pane zvese, isu tichaenda kudzvanya pa «Dhawunirodha Chitupa«, skrini ichavhura kwatinopinda DNI / NIE yedu, yedu yekutanga zita uye kodhi yekukumbira iyo yavakatitumira neemail. Isu tinodzvanyawo kuti tigamuchire mashandisirwo ekushandisa uye kana tiri kushandisa bhurawuza rakafanana uye iyo Mac imwechete yatakakumbira, chitupa chinozo dhawunirodwa nekumisikidzwa. Isu tatova neyedu setifiketi yedhijitari yakaiswa paMac, ikozvino tinoita backup neyakavanzika kiyi (Zvakakosha) kuitira kuti uiise pane iyo iPhone, pane izvi isu tinovhura Zvishandiso> Sarudzo> Yepamberi> Tarisa Zvitifiketi> Vanhu, tinya pane chitupa uye sarudza "Export". Tinofanira kukumbira sarudzo yekutumira mu ".pfx" fomati uye nekupa password.
Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari pane iyo iPhone
Ino yave nguva yekutora mukana wekuchengetedza kopi yedhijitari kuiisa pane yedu iPhone kana iPad. Kune izvi isu tichaenda kutora kubva kuMac kwedu (kana kubva ku iPhone yedu kana tichigona kuwana iyo faira) uye tichaenda kutumira chitupa chedigital kuburikidza neemail kukero inowanikwa kubva kuSafari, semuenzaniso Hotmail kana Gmail. Takatumirana chitupa chedigital uye ikozvino tave kuzowana iyo sevhisi sevhisi kuburikidza neSafari.
Isu tinotsvaga iyo email mubhokisi rekunyora uye tinya pane yakanamatira faira, ichave iri dhijitari chitupa. Ipapo hwindo idzva rinozovhura iro rinotitaurira kuti tiri kuisa "Mbiri". Tinodzvanya kuisa mukona yepamusoro yekona tobva taenda Zvirongwa> Zvakajairika> Maprofiles. Pano tiri kuzopedzisa kuiisa nekudzvanya pairi, isu tinopinda yedu yekuvhura kodhikana iyo iPhone uyezve iyo kiyi yataisa kudigital chitupa uye isu tichava nesitifiketi yakaiswa zvirinyore uye zvinoshanda zvizere pane yedu iPhone.
Tinogona kudzokorora chiito ichi nemidziyo yakawanda sekuda kwedu, uye Isu tinokukurudzira kuti uchengete kopi yekuchengetedza yako chitupa mune yevhisi sevhisi kana muemail, nekuti kana rimwe zuva ukarasikirwa kana kudzoreredza Mac kubva kwatakaburitsa chitupa chedigital, hauchakwanise kuiburitsa mu ".pfx" fomati, kunyangwe iwe waisa chitupa ichi pane mamwe makomputa , hauzomboenda kunokwanisa kutora kiyi yakavanzika saka isu tinofanirwa kutanga maitiro futi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuisa satifiketi yedhijitari pane yako Mac uye yako iPhone
Jaime Puchol akadaro
Kana iwe uchida kushandisa zvitupa kuverenga zvemagetsi zviziviso kubva kuTreasurement (semuenzaniso) iwe unofanirwa kuisa iyo PAG SNE application. Pakadaro, iwe unofanira zvakare kuisa zvitifiketi kuburikidza iTunes muchikamu chave kunzi Shared mafaera.
Inoshanda zvakakwana. Zviripachena iwe unofanirwa kunge wakanyoresawo pawebhusaiti "Notifications 060" kuitira kuti zviziviso zvezaziso zvisvike kwauri
Pindura Jaime Puchol
Mhoro Jamie. Izvo hazvidikanwa kuisa chero chinhu kuti uverenge zvemagetsi zviziviso zveHaimari kubva kuMac, ingo pinda iyo AEAT> Elektroniki Hofisi uye uzvizivise iwe pachako.
Ndatenda nechinyorwa chekuisa FNMT chitupa chemagetsi pane iOS
Unoziva here kuti .pdf magwaro anogona kusainwa nechitupa chakaiswa paIOS?
Iine chero vhezheni yeAdobe Acrobat uye vamwe vakaita saPDF Nyanzvi.
Unogona here kusaina muIOS (iPhone / iPad) iyo pdf ine chitupa chemagetsi, semuenzaniso kubva kuFNMT muAdobe "PDF Nyanzvi" kana "Acrobat" Mapurogiramu?
Sekureva kwaKoo, zvigadzirwa zvePhones zvichawira ne10% nekuda kweCoronavirus
EA inosimbisa kuti ichiri kushanda kuburitsa Apex Legends pane nhare mbozha